महन्थले भने–मधेसका जनतासामु खाली हात कसरी मुख देखाउनु ? – email khabar | Latest news of Nepal
महन्थले भने–मधेसका जनतासामु खाली हात कसरी मुख देखाउनु ?
प्रकाशित : २०७३ माघ २८ गते २:२३
माघ २८,काठमाडौं – तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेस आन्दोलनमा धेरैले ज्यान गुमाए, पिटाइ खाए, जेल–नेल र हन्डर खाए, कति त अपांग भए । यस्तो अवस्थामा खाली हात निर्वाचनमा जाऊँ भन्दा जनतालाई के जवाफ दिनू? भनेर राष्ट्रपतिसँग गुनासो गरेका छन्।
‘अहिले पहाड र तराई दुवैतिर अतिवादीहरू अगाडि आएका छन् । त्यसले जटिलता नजन्माओस् भन्नेतर्फ मुख्य राजनीतिक शक्ति बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । संविधान संशोधन गर्ने गरी तीनबुँदे सम्झौता गरेकाले हामीले अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्‍यौँ । तर, संशोधनमा छलफल हुन सकेको छैन । हामीले अड्काएको होइन, एमालेसँग पनि वार्ता गर्न तयार छौँ, सरकारको प्रस्ताव भएकाले उसलाई मनाउने मुख्य जिम्मेवारी त सरकारको हो नि,’ उनले भने।
यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले महन्थ ठाकुरको प्रशंसा गर्दै आफूभन्दा पनि तपाईं धेरै सिनियर लिडर भएको बताउकी छन्।
‘महन्थजी तपाईं धेरै अनुभवी र मभन्दा पनि धेरै ‘सिनियर लिडर’ हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ । त्यसैले मैले तपाईंलाई सधैँभरि सम्मान गर्दै आएकी छु । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको हरेक आन्दोलनमा तपाईंको धेरै महत्वपूर्ण योगदान छ, अहिलेको यो जटिल परिस्थितिमा पनि निकास निकास खोज्न भूमिका खेल्नुस्,’ उनले भनिन्।
दाताले पैसा नदिँदा पुनर्निर्माण प्रभावित
डेढ दर्जन केबलकारको अनुमति रोकियो
फलोअप : फुङ्लिङमा आगलागीबाट ३३८ परिवार विस्थापित
इंग्लिस प्रिमियर लिग सिटीलाई १५ अंकको अग्रता